Angalada sheekooyinka wararka | Somsoon
Home SAXAAFADA Angalada sheekooyinka wararka
Angalada sheekooyinka wararka
Marka la diyaarinayo war ama falanqeynta sheekooyinka wararka, suxufigu wuxu raadiyaa:
Dhacdo wareed (Duqeyn ama qarax, Shir saxaafadeed, iwm), warbixin sanadeed, ama xaqiiq cusub oo ku saabsan dhacdo oo hore u dhacday.
Horumar ama war cusub ( Shuban Biyood markii ugu horraysay dillaacay) ama wax hoos u dhacay ama sare u kacay sida kor u kac ama hoos u dhac ku yimid tirada dadka qaba fayriska HIV-GA
Warbixin cusub, war saxaafadeed ama warmurtiyeed khuseeya amuur ama xaalad, taasi oo ku soo kordhinaysa xaqiiq cusub ama fikrado khuseeya xaalad.
Angalada mawduucyada guud
Markaad haysato mawduuc guud oo kaliya ama xaalad aad doonayso inaad sheeko ka dhigto. (saboolnimada, kufsiga, xuquuqda caruurta iwm):
Waydii dadka aad xidhiidhka leedihay iyo kuwa kale ee aqoonta u leh mawduuca. Maxaa ku cusub mawduucan? Fikrad sheeko laga samayn karo maka hayaan mawduucan?
Samee cilmi baadhis hor dhac ah- ururi xaqiiqda. Is waydii ( Waa ayyo cidda haysa daraasadda ama xogta kiisaska kufisga)?
Hal ama labo kiis oo loo isticmaali karo si arrinta diiradda loo saaro oo ay mid weun u noqto. Tusaale ahaan; kiis ku saabasan kufsi ka dhacay xarun barokacayaal waxaa loo isticmaali karaa si diiradda loo saaro oo looga dhigo arrin ama dhacdo weyn oo ifisa dhibaatada baaxadda leh ee kufsi ee ka jirta xeryaha barokacayaasha.
Sanadguuro , xus dhado waxay u noqon kartaaa wax lagu soo jiito dhageystaha sheekada ama warka ; tusaale ahaan ; maalinta Caalamiga ah ee dadka Naafada ah ; maalinta madaxbannaanida Soomaliland iyo wixi la mid ah.
Tixgali nooca sheekada (wararka,falanqeynta wararka, maqaal dadku xiiseeyo , iwm)
U eeg angalka(iyo nooca sheekada) si aad u ururiso xaqiiq badan.
Hadii xaqiiqdii aanad heli karin docdii ama angalkii? tuur fikrada sheekadan, sheeko kale ama wax kale raadi.
Angalada: Sheeko qof ku salaysan laakiin dad badan saamayn ku leh (Human interest stories).
Suxufigu waxa uu diirada saaraa hal ama laba qof kuwaasi oo haya sheekooyin shakhsiyeed oo la sheego. Tani waxay noqon kartaa dad ku lug leh dhacdo wareed ama kuwo sheekooyinkooda loo isticmaali karo in lagu soo ifbixiyo dhibaato ka jirta bulshada dhexdeeda.
Qof ku waxyeeloobay dhacdo dhib badan sida daadadka ama dab iyo wixii la mid ah.
•Qof wax yar ka hor jago loo magacaabay ama loo doortay jago cusub waxaa laga sameyn karaa sheeko taariikh nololeedkiisa ku saabsan oo qeexeysa waxyaabo la xiriira noloshiisii hore iyo waxa uu qaban jiray.
•Qof naafo ah.
Caruurta darbi jiifka ah.
Xaas uu dilay ninkeedii
Macalin, Dhakhtar,Nin booliis ah.
Sheekada dadku ( Human Interest) waxay si ugu xidhan tahay wararkii u dambeeyey (furitaanka xarun cusub oo caawisa haweenka ragoodu dilaan,tusaale).Laakiin muhiim maaha inay sheekadaasi ku xidhanaato warka –mararka qaar sheekada shakhsigu waa mid aad u xiiso badan ama aan la filayn waxaanay isu taagi kartaa iyadoo aan ku xidhnayn warka.
Suxufiyiintu waxay sidoo kale wareystaan dad si weyn loo yaqaan ka dib waxay ka qoraan sheekooyin ay bini aadamku xiiseeyaan(“Taariikhda qofka (profile)” ama “sheekooyink kale oo faahfaahin dheeraad ah bixinaya (portrait stories)” oo ku saabsan noloshooda iyo shaqooyinkooda.Tusaale ahaan:
Heesaa caan ah, Gabayaa ama kuwo kale oo caan ah.
Qof imika loo magacaabay jago (tusaale Duqa caasimada Hargeisa)
Qof ganacsiga Horyaal ku ah sida mulkiilaha Dahabshiil.
Qof gaadhay guul muuqata: qof buur aad u dheer koray, tartame gabyaa oo guuleystay” iwm.
Inta badan dadkan waxa lala yeeshay wareysiyo iyadoo sheekooyin laga qoray marar badan. Sidaa darteed suxufiyiintu waa inay isku dayaan inay waydiiyaan dadkan su’aalo ka duwan kuwii hore si ay uga helaan xog cusub qofkan- si ay u helaan angal cusub taasi oo aanay dhageystayaashu hore u maqal.
Noqo qof badbaddali kara angalka
u dabacsanaw angaladaada markaad cilmi baadhista iyo qoraalka sheekada wado, haka baqanin inaad beddesho angalkaaga, haddaad hesho mid ka fiican. Badi sheekooyinka waa weyni waxay leeyihiin angalo macquul ah iyadoo ka ugu fiicani aanu noqon karin ka ugu horeeya ee aad ka fikirtay.
Xusuusnaw, sheekadu waa sida basasha oo kale – waxay leedahay lakabyo kala duwan(iyo angalo)faro badan iyadoo inta badan wadnaha sheekadu ay qarsoon tahay.
Sidoo kale markaad xulanayso angalkaga rasmiga ah, ha ilaawin inaad tixgaliso inay sheeko cusub tahay iyo inay tahay sheeko hore oo si buuxda loogu baahiyey idaacadaada ama warbaahinta kale. Ha u sameyn sheekada si la mid ah sidii horay ay uugu sameeyeen wariyaasha kale – ka eeg angal cusub – ka eeg daba galka sheekada”. Sheeko wareedkasta waxay noqon kartaa mid socota oo leh wajiyo faro badan oo sheekada sii wadi kara taasi oo diirada saari karta angalo kala duwan oo xog dheeraad ah u gudbinaysa dhagaystaha.
Article horeCC Shakuur: Taageerayaasha mararka qaar bulshada bohol ayey ku ridaan
Article socoda Dadka uu soo ridanayo cudurka COVID-19 oo aad u kordhay dunnida oo dhan
Kulan ay ka maqnaayeen A/Madoobe & Deni oo ka dhacay Afisyooni
ANGALADA WARKA – AHMIYADA DIIRRADDA
Warka Culus & Warka Fudud
NOOCYADA SHEEKOOYINKA SAXAAFADDA
Caro hor leh oo ka dhalatay Weriye la xiray xilli uu toos u tebinaayey dibadbaxyada Minneapolis
DF oo war ka soo saartay Weriyaal maanta lagu jir-dilay Muqdisho
DF oo jawaab rasmi ah kasoo saartay eedda suxufiyiinta: “Ma yaqaanaan cidda dileysa”
Hey’adda HRW oo DF ku eedeysay inay laba jibaartay tacadiyada ka dhanka ah Saxaafadda
Maamulka K/Galbeed oo ka war bixiyey eedaha loo heysto Weriye Mukhtaar Maxamed Catoosh oo u xiran
Safiirka Midowga Yurub oo DF ku dhaleeceeyey caburinta Saxaafadda
Weriye caan ah oo u dhintay xanuunka Coronavirus
Yuusuf Garaad: Ku. Tifatirayaasha iyo Suxufiyiinta Soomaaliyeed